O aad faraxsan tahay - qoraalada iyo qoraalka daabacaadda iyo midabaynta
O aad faraxsan tahay - qoraalo iyo qoraal
O waad ku faraxsan tahay - qoraalka
Muusikada iyo qoraalka Waad ku faraxsan tahay
O waad ku faraxsan tahay, oheshay,
Waqtiga firaaqada ee raaxada!
Dunida lumay, Masiixu wuxuu ku dhashay.
Farxa oo reyreeya, Masiixa.
Masiixu wuxuu u muuqday inuu naga furfuro:
Ciidammada joogtada ah waxay ku faraxsan yihiin sharaf.
Qoraal furan ee song song song O aad ku faraxsan tahay sida faylka graphic